WARARKII MAANTA: APRIL 26
Baaq kasoo baxay Hay’adda Mu’atamarka Caalamka Islaamka ee Somalia
Hoggaamiyalaal Soomaaliyeed oo Taageeray go'aankii Kenya
Ergooyinka shirka Soomaalida oo Meel kale loo qoondeeyey
Hay’adda Mu’atamarka Caalamka Islaamka ee Somalia, ayaa soo saartay Baaq ku wajahan sidii Shirka Soomaalida uu ugu tallaabsan lahaa Horumar isla markaana ugu bad baadi lahaa Caqabada adag ee soo wajahay Mudadii uu hakadka ku jiray.
Wakiilka Hay’adda Mu’atamarka Caalamka Islaamka ee Somalia, Cismaan Buube Yuusuf Rooble, oo qadka Taleefoonka kula hadlay Shabakaddan isaga oo jooga Magaaladda Jeddah ee Boqortooyadda Sucuudi Carabiya isla markaana ka warbixinayay Baaqa ay soo saartay Hay’addaasi ayaa sheegay in Baaqoodu uu si gaar ah ugu wajahan yahay Dawladda Ku Meel Gaarka ah, Kooxaha Kale ee SIyaasadda, iyo Hogaamiye Dhaqameedyadda, Wuxuuna waydiistay dhinacyadaas inay dib ugu laabtaan Madasha Shirka Kenya si loo soo afjaro Khilaafaadka siyaasadeed ee Somalia.
Buube waxa uu sidoo kale ugu baaqay Soomaalida inay ka dhabeeyaan heshiiskii Xabad Joojinta ay ee ay dhinacyadda Siyaasadda Soomaalidu Sannadkii hore ku saxiixeen Kenya, Wuxuuna ka codsaday Dalalka Xuduudaha la leh Somalia inay dhawraan Qaraarkii Cunaqabataynta Hubka Somalia ee uu billawgii Sagaashameeyadii soo saaray Golaha Ammaanka ee Qaramadda Midoobay, iyadoo Beesha Caalamka, Urur Gobaleedka IGAD, iyo cidii danaynaysa Arrinta Somalia uu ka codsaday inay ka shaqeeyaan sidii Somalia ay uga dhismi lahayd Dawlad Wadaag ah oo ay Kooxaha Soomaalidu u dhan yihiin.
Hay’adda Mu’atamarka Caalamka Islaamka waxay walaac ka muujisay Joojinta Baasaboorka Soomaaliga oo ay sheegtay in laga yaabo inuu caqabad ku noqon karo habka Socodsiinta Shirka, Waxayna Hay’addu Hoosta ka xariiqday inay door muuqda ka ciyaari doonto Dib u Heshiisiinta iyo dib u dhiska Somalia.
Somalia oo Xubin ka ah Ururka Islaamka ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay bur burtay Dawladii Milatariga ee Somalia waxay hay’adaha Islaamku kaalin fir fircoon ka qaadanayeen Samafalka Shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, iyadoo Baaqana uu soo baxay Maalmo yar kadib markii Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Kenya uu soo saaray Qoraal uu ka faah faahinayo Qaabka uu u soconayo Wajiga Saddexaad ee Shirka iyo goorta uu billaabanayo.
Qaar ka mida Kooxaha Soomaalida ee ka qayb galaya Shirka Dib U Heshiisiinta Kenya ayaa taageeray Qoraalkii uu dhawaan soo saaray Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Kenya, kaasoo qeexayay in Wajiga Saddexaad ee Shirka la billaabo 6 May, isla markaana 1-da Luulyo lagu soo afjaro Shirka Caleemo Saarka Dawlad Soomaaliyeed.
Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, Golaha Samata Bixinta Qaranka, G-8, Bulshadda Rayidka iyo Koox ka mida SRRC ayaa ka soo saaray Nairobi qoraal wadajir ah oo ay ku taageerayaan Hindisaha Kenya ee hab socod siinta Wajiga Saddexaad ee Shirka, Waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin dhinacooda fulinta iyo meel marinta dhamaan qodobadii qoraalka Kolonzo Mosiyooko ku qeexnaa.
Kooxahan soo saaray Qoraalka Taageeradda ah waxay waydiisteen IGAD inay dhinaceeda meel mariso Qodobadda ku xusan Qoraalka ka soo baxay Wasiirka, Waxayna sheegeen in haddii qodobadaas la dhaqan galiyo isla markaana laga illaaliyo in mar kale uu shirka Dib u dhac ku yimaado ay xaqiiqo tahay in shirku uu ku tallaabsan doono Horumar Siyaasadeed.
Qoraalkan waxaa ku saxiixnaa, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Ku Meel Gaarka ah, Maxamed Cabdi Yuusuf, Guddoomiye Ku Xigeenka Golaha Samatabixinta, Cusmaan Caato, Guddoomiyaha G-8, Maxamed Qanyare, La Guddoomiyaha SRRC-da, Col Xasan Shaatigaduud, iyo Caasha Xaaji Cilmi oo ku saxiixday Magaca Ururada Bulshadda Rayidka ah, Waxaana qoraalkaasi Taageeradda ah Nuqul ka mida la soo gaarsiiyay Xafiiska Shabakaddan ee Nairobi loo gubiyay Dawlada Kenya, Guddiga Fududaynta IGAD, Wakiiladda Beesha Caalamka, iyo Ergooyinka Soomaalida ah ee ku sugan Madasha Shirka.
Kooxaha Soomaalida ayaa u muuqda inay ku kala qaybsan yihiin qoraalkii Wasiirka Arrimaha DIbada ee Kenya uu soo saaray, iyadoo shalay ay Kooxaha Qaarkood ku tilmaameen Qoraalkaasi mid shirka Fashil sii galinaya.
Ergooyinka Soomaalida ah ee sida Rasmiga ah uga qayb qaadanaysa Shirka Kenya ayaa loo qorsheeyay in la dajiyo Meel Gaar ah oo ka baxsan Goobta ay hadda degan yihiin ergooyinku ee Mbagathi.
Xubno ka tirsan Guddiga Hawl Fududaynta IGAD ayaa u sheegay Shabakaddan in Hoteeladda ay degan yihiin Ergooyinka Soomaalida ah intooda badan la faarujin doono oo aysan IGAD masuul ka noqon doonin Qarashaadka ku baxaya Ergooyinka Hoteeladda iska dagay, Wuxuuna sheegay in la dajin doono Ergooyinka Rasmiga ah ee ka qayb qaadanaysa Wajiga Saddexaad ee shirka oo Tiradoodu gaarayso 203 qof goob gaar ah.
Xubnahan oo codsaday inaan magacyadooda la adeegsan ayaa sheegay inay ku wareereen Soomaalida oo mid kastaa uu doonayo in loo aqoonsado inuu ka mid yahay Ergadda, Halka qaarkoodna ayba ku doodayaan inay yihiin Hogaamiyayaal Awood ku leh Somalia, Waxayna sheegeen si jahwareerkaas looga badbaado inay u qorsheeyeen inta ay casuumeen inay dajiyaan Goob gaar ah.
Madaxwaynaha Masar, Xusni Mubaarak ayaa markii ugu horsaysay si adag u weeraray Siyaasadda Madaxwaynaha Maraykanka, George W. Bush ee ku aadan Bariga Dhexe.
Mubaarak waxa uu ka hadlay Taageeradda Bush uu siiyay Siyaasadda Sharon uu ku doonayo inuu qaybo ka mida Dhulka Falastiin uga baxo, Wuxuuna sheegay in Taageeradda Maraykanka ee Sharon ay muujinayso inuusan dhex dhexaad ka ahayn arrinta Gobalka Bariga Dhexe.
Mubaarak waxa uu sidoo kale sheegay in ka bixitaanka qaybo ka mida dhulka Falastiin ee Isreal ay xadgudub ku tahay Xeerarka Qaramadda Midoobay, sidaas darteedna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Isreal ay ka baxdo dhamaan dhulalka ay Haysato ee Falastiiniyiinta.
Hay’adda Sare ee Culumadda Dalka Ciraaq ayaa ka digay qorshe ay sheegeen in Maraykanku uu ku weerarayo Magaaladda go’doonsan ee Fulluujah.
Bayaan ay hay’addu soo saartay ayaa lagu sheegay in Xabad Joojinta lagu ballamay inay billaabato Tallaadada uu Maraykanku uga gol leeyahay inuu waqtiga ku dheeraysto, waxayna waydiisteen Saraakiisha Hogaaminaysa Hawlgalka Maraykanka inay damaanad qaad buuxa ka bixiyaaan inaysan weerarayn Fulluujah haddii hubka Culus laga uruuriyo Dagaalyahanadda u jilib dhigay Duulaanka Maraykanka oo ku fashilmay ee Fullujah.
Xaaladda Magaaladda Fulluujah ayaa wali ah mid kacsan, iyadoo Masuuliyiinta Maraykanka oo uu ugu sareeyo Madaxwayne Bush-na ay ka fiirsanayaan sidii ay Magaaladaasi ka yeeli lahaayeen.
Bush ayaa lagu waddaa inuu Taleefoonka la iska arko kula hadlo Saraakiisha Hogaaminaysa Hawlgalka Fullujah, Waxaana uu soo saari doonaa Go’aanka ugu dambeeya ee aqalka Cad, inkastoo uusan Bush ahayn khabiir Milatari haddana iyada oo aan looga maarmin xaaladda taagan ayaa keentay inuu soo faragashadda Arrinta Fullujah, kadib markii lagu dhaliilay inuusan dan ka lahayn Askarta Maraykanka ku la’anaysa CIraaq, isla markaana uu isaga damaashaadayo Beerta lagu Nasto ee Camp David.